“Meesha waxa ka dhacay ma ahayn wax fiican, waxaa is-rasaaseysay askar isku soo dhawaatay oo kala shakisay..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Meesha waxa ka dhacay ma ahayn wax fiican, waxaa is-rasaaseysay askar isku soo dhawaatay oo kala shakisay..”
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale oo ka hadlay dilkii xalay ay illaaladiisa u geysteen wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji ayaa marka hore ka tacsiyeeyay geerida naxdinta lahayd ee wasiirka ku timid.
Wareysi uu hanti dhowraha siiyay warbaahinta ayuu ku sheegay in dilka wasiir Cabaas Siraaji uu ahaa mid shil ahaan ku dhacay, kadib markii ay kala shakiyeen labada dhinac ee illaaladiisa iyo illaalada wasiirka, kadibne ay halkaasi isku rasaaseeyeen.
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa tilmaamay inuu aad uga xun yahay sida wax u dhaceen, isagoona geeridda wasiirka uga tacsiyeeyay eheladii, asxaabtii iyo shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, wuxuu hanti dhowraha guud ee Qaranka sheegay inay haatan socdaan baaritaano islamarkaaana aanu kahor dhaceeynin baaritaankaasi, dibna faah faahin ka bixin doonno wixii baaritaanadaasi kasoo baxa.
“Marka hore waan ka tacsiyeynayaa wasiirka dhintay, Allaha u naxariisto, ehelkiisa iyo umadda Soomaaliyeed waan kaga tacsiyeynayaa, meesha waxa ka dhacay ma ahayn wax fiican, waxaa is-rasaaseysay askar isku soo dhawaatay oo kala shakisay, shil ayuuna ahaa, waxaana ku baxay nin walaalkey ah, waxaana arrintaasi ku socota baaritaan, mana kahor dhacaayo baaritaankaas” Sidaasi waxaa yiri hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale.
Ugu dambeyn, meydka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona aaskiisa ay ka qeyb-gali doonaan mas’uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.